Lọ ọrụ na-emepụta nchara ígwè - China Steel Cage Manufacturers, Suppliers
Road Holland Waya ntupu 50mm ...
Cgwè nkenke DIG Nkwado M ...
Kwanyere ntekwasa Lobster Netting ...
Hardware akwa Hot Itinye Galv ...
Plastic ntekwasa welded Waya ...
Anyị na-etinye aka n'inye ngwaahịa dị mma nke na-anọchite anya uru dị mma na ọkwa n ofomi nke ọrụ ndị ahịa na ọkwa niile na azụmaahịa anyị. Ọnọdụ anyị nke akụrụngwa, ahụmịhe dị ukwuu, njikwa njikwa sayensị na ndị otu raara onwe ha nye na-eme ka azịza ntanetị zuru oke maka ngwa ụwa.
Nkwakọba ịkpakọba Steel Waya ntupu Metal onu Nchekwa akpa
Arelọ nkwakọba ihe na-atụgharị nchara nchara waya ntanye Oghere Nchekwa, bụ ụdị ụlọ ọrụ mmepụta ihe na-ewu ewu nke nwere pallet na onu. Ọ na-mere nke ntụpọ welded akara ígwè na ala akụkụ nke U udi ígwè weld support iru mmanye nke ihe owuwu. Ọ bụ ibu ikike nwere ike iru 500-1700KG. Product Ihe Waya ntupu akpa na-mara dị ka urukurubụba onu, nchekwa onu, pallet onu, elu-edu ígwè obi tara mmiri site oyi oyi welded elu ike, ibu ikike, jupụtara na nkume, ihe ...
PITA preform waya ntupu onu Collapsible Metal Steel akpa
PET preform akpa Ezubere maka Coca cola, na-eji ire ụtọ ịgbado ọkụ na zinc elu. Ọ bụ stackable na collapsible, mfe iji rụọ ọrụ. Ezubere ya maka PET preform ụlọ ọrụ, maka nchekwa na njem. Jiri mpempe akwụkwọ PP n'ime, mee ka onu ahụ dị ọcha ma dịkwa mma maka PET preform. Ọ nwere njide aka nke onwe ya, ibu ibu nwere ike iru 800KG. Ọtụtụ-eji maka PET preform na imegharị ihe maka iji ụlọ ọrụ. Product Ihe Product Type PITA preform waya ntupu onu Size L1200 * W1010 * H1200 waya ntupu 62 * 125mm Weig ...
Industrial ịkpakọba kpaliri Waya ntupu akpa na eyi mpempe akwụkwọ
Waya ntupu akpa a na-akpọ nchekwa ngịga na urukurubụba ngịga. Ha bụ ndị dị mkpa ụdị lọjistik akpa na nchekwa na njem. Ha nwere uru nke ikike nchekwa echekwara, ịkwado ihe dị mma, ịchekwa anya, na ịgbakọ ọnụego dị mfe, ma mekwaa ka ojiji nke nchekwa nchekwa. Product Ihe Product Type PITA preform ma ọ bụ Plastic okpu nchekwa Size L1200 * W1000 * H1140 Waya ntupu 50 * 100mm Weight / Set 74KG ọkpụrụkpụ 5.0mm Ibu Ikike 500 ...
Euro Style welded Foldable Waya ntupu akpa maka egweri Industry
Euro Style welded Foldable Waya ntupu akpa, electro kpaliri na 500KG -1700KGS ikike loading. Na 8000 tent kwa ọnwa mmepụta ikike na nlezianya nyocha wee nweta. Nwere ike na-enye ahaziri size na imewe na ịbịaru. Product Ihe Waya ntupu akpa na-mara dị ka urukurubụba onu, nchekwa onu, pallet onu, elu-edu ígwè obi tara mmiri site oyi oyi welded elu ike, ibu ikike, jupụtara na nkume, na-adaba adaba njem, nwere ike re-eji iji belata nchekwa na. ..
Collapsible Metal Steel Waya ntupu pallet akpa
Product Ihe Collapsible na Foldable Metal Steel Waya ntupu pallet akpa, ka nke Q235 ala carbon ígwè waya, ọ bụ mba ọkọlọtọ logistic akpa. Waya ntupu akpa na-mara dị ka urukurubụba onu, nchekwa onu, pallet onu, elu-edu ígwè obi tara mmiri site oyi welded elu ike, ibu ikike, jupụtara na nkume, na-adaba adaba njem. Product aha Waya ntupu pallet onu Size ahaziri waya ntupu 50 * 50mm; 50 * 100mm; 100 * 100mm ọkpụrụkpụ 4.8 ~ 6.0mm Ibu Ibu Cap ...
Nkwakọba Auto Parts Nchekwa Waya ntupu Stackable ịkpakọba Metal onu akpa
Stackable Metal onu tumadi ji na akpakanamde ụlọ ọrụ maka ọkara ka arọ arọ ihe, dị ka akpakanamde akụkụ, dị ka breeki discs, radiators na ndị ọzọ na mmiri. Nwere ike nchekwa na pallet racks ma ọ bụ tojupụtara 1-4 n'ígwé iji mee ka ụlọ nkwakọba ihe ịrụ ọrụ nke ọma. Product Ihe Ihe Q235 ígwè Mpụga size 1140 x 1140 x 545mm (LxWxH) ma ọ bụ ahaziri Esịtidem size 1050 x 1050 x 385mm (LxWxH) Foldable size 1150 x 1150 x H250mm Ibu Ibu 1000kg ma ọ bụ ahaziri Ibu Ibu n'ime 20FT akpa 8 ...
Igbe Mgbaji Ejiri Ejiri na Benz maka Akụrụngwa Akụrụngwa
Stackable Metal Box bụ High-ike, Space-oru oma, Cost-irè, Easy ibu na ibudata onu. Ọ na ọtụtụ-eji na nnukwu ihe njikwa, logistic na nchekwa, karịsịa maka akpakanamde akụkụ, ngwa na akụkụ ahụ mapụtara, ngwaike, ígwè, ngwá electronic, et.This metal igbe nwere ike ịzọpụta iga na-eri, ọrụ na-eri na nkwakọba nchekwa na-eri. Product Ihe metal aha metal efere chemical ụlọ ọrụ nnukwu nnukwu containers IBC ihe Nwayọọ Steel Waya Q235, Square tube, n'akuku ...
Nke a na-adọkpụ na-ada ada na Automotive Industries
Stackable Steel Box bụ otu n'ime ụlọ ọrụ mmepụta ihe a ma ama, nwee ọrụ nke pallet na ngịga. Ọ na ọtụtụ-eji na nnukwu ihe njikwa, logistic na nchekwa, karịsịa maka akpakanamde akụkụ, ngwa na akụkụ ahụ mapụtara, ngwaike, ígwè, ngwá electronic, wdg Nwere ike nchekwa na pallet racks ma ọ bụ tojupụtara 1-4 n'ígwé na-eme ka nkwakọba ihe ịrụ ọrụ nke ọma. Product Ihe onwunwe Q235 ígwè Mpụga size 1140 x 1140 x 545mm (LxWxH) ma ọ bụ ahaziri Esịtidem size 1050 x 1050 x 385mm (LxWxH) Fo ...
Nrụgide oru ụlọ nkwakọba ihe Parts Stackable Steel Pallet Cage Stillage
Stackable Metal onu welded site siri ike ígwè mmanya (mba ọkọlọtọ Q235 ígwè waya), disposable zọ ụkwụ na ala iji hụ na nkezi mgbali ma dịkwuo siri ike. Ọ bụ ọnụ ụzọ dobe ọnụ ụzọ na-eme ka ọ dị mfe ịlele ngwongwo ọbụlagodi mgbe akwakọbara ya. Enwere ike itinye ya n'ọrụ na akụkụ akpaaka, nhazi igwe, ngwa elektrọnik, ụlọ ọrụ na ihe ọverageụ andụ na ihe ọ beụverageụ, ụlọ ọrụ kemịkalị na ụlọ ọrụ mmepụta ihe, usoro mmepụta ngwaahịa na ngwa ahịa. Product Ihe onwunwe Q235 ígwè ...
Collapsible Stillage Gitterbox Solid isiike Container
A na-akpọkwa Mpempe Akwụkwọ Mpempe Akwụkwọ Mpịakọta dị ka Stillage, nke a na-ejikarị na ụlọ ọrụ ụlọ na ụlọ ọrụ ụgbọ ala. Anyị na ngwaahịa na-emepụta site akpaka ịgbado ọkụ igwe na elu ịgbado ọkụ ígwè ọrụ na-, otú ahụ ịgbado ọkụ àgwà bụ na-agbanwe agbanwe na zuru, dị nnọọ mma na ọdịdị na dịghị efu ịgbado ọkụ. Product Ihe Product aha Nrụgide ọrụ elu àgwà stillage gitterbox siri ike isiike akpa stillage Ihe nwayọọ Steel Waya Q235, Square tube, n'akuku Steel, Ewepụghị Ogwe Mpụga Dimens ...